10 Toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao | Save A Train
an-trano > Travel Europe > 10 Toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao
Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Polonina, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Miafina lavitra amin'ny vahoaka mpizaha tany, ireo 10 toerana maro loko indrindra eran-tany, dia tena aingam-panahy. Nahita aingam-panahy ny mpanakanto sy ny mpanoratra tamin'ireny toerana maro loko ireny. Noho izany, tena tanteraka tokoa ny angano, ary ny fitsidihana ny iray amin'ireo toerana ireo dia azo antoka fa ho traikefa hanova fiainana ho anao koa.
1. Toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao: Cinque Terre, Italia
Andro ririnina volondavenona na andro fahavaratra misy lanitra manga, Be loko i Cinque Terre amin'ny toetrandro rehetra. Ny trano tsara tarehy dia manana fijery ny ranomasina manga ary mamorona sary miloko indrindra. Ary, ny tanàna rehetra tsidihinao ao Cinque Terre dia miloko kokoa noho ny hafa, misy trano miloko mavo, mavokely, MENA, ary ny volomboasary.
Noho izany, miaraka amin'ny ranomasina manga sy havoana maitso, ny faritra Cinque Terre any Italia dia iray amin'ireo toerana mareva-doko indrindra eto an-tany. Ity dia feno loko ity dia manomboka ao amin'ny tanànan'i La Spezia, tanàna seranan-tsambo lehibe sy toerana fiaingan'ny lamasinina Cinque Terre. Mandehandeha manodidina an'i Cinque Terre amin'ny lamasinina no tsara indrindra satria mandalo ny tanàna tsirairay ny lamasinina, amin'izay ianao afaka mandeha ary miverina amin'ny toerana rehetra tianao amin'ny antoandro.
2. Tulip Fields, Holandy
Pink, fotsy, voasary, LAMBA VOLOMPARASY, Sahan'i tulip Holland dia mahagaga amin'ny loko rehetra amin'ny avana. Ny toerana tsara indrindra hahitanao ny saha tulip mahatalanjona dia any Keukenhof ary afaka mankafy ny hatsarana maimaim-poana ianao. Dimy ambin'ny folo minitra miala an'i Keukenhof ireo saha mahafinaritra. na izany aza, Ny hatsaran-tarehy tena tsy fahita firy dia mitohy mandritra ny dimy ambin'ny folo minitra hafa mankany amin'ny tulips tsara tarehy kokoa.
Afaka mankafy ity fomba fijery miloko ity ianao eo anelanelan'ny Aprily ka hatramin'ny tapaky ny volana Mey, mandritra ny tulips’ mamony. Ny saha tulip lehibe dia dia kely avy any Amsterdam, ka ho mahafinaritra izany andro diany mankany Holandy’ ambanivohitra. Ankoatry ny, Afaka manofa bisikileta toy ny eo an-toerana ianao mba hankafizana ny voninkazo mahavariana.
3. Toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao: Menton Côte d'Azur, Frantsa
Amin'ny morontsiraka French Riviera tsara tarehy, fa lavitra ny paparazzi ao Monte Carlo, Menton dia tanàna amoron-tsiraka mahavariana. Ny tranobe pastel Belle Epoque, ampio ny hakanton'ity tanàna nofinofy ity ary mahasarika ny mpitsidika sambany rehetra.
Afaka mankany Menton avy any amin'ny toerana rehetra any Frantsa na Italia ianao satria akaiky ny sisintany Italiana. Cote D'Azur dia faritra tsara tarehy any Frantsa ary mahatonga ny toerana mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatra. Noho izany, ankoatra ny fanaovana sary lehibe ao ambadiky ny tanàna maro loko, ny fitsangantsanganana an-tsambo dia fomba tena tsara handaniana fialan-tsasatra mahafinaritra any Menton.
Nantsoina hoe tanàna ao anaty tanàna ny tanàna, ny afovoan-tanàna taloha Pelourinho any Salvador dia iray amin'ireo toerana maro loko indrindra eran-tany. Ny toerana tokana hanaovana lavanty andevo dia izao no toerana miloko sy velona indrindra eto Salvador. Ny faritra dia mirehareha amin'ny fasadin'ny trano fanjanahantany maro loko ary fonenan'ny mpanakanto, mozika, ary fiainana alina mahafinaritra.
Ary, Pelourinho maroloko dia ivon-kolontsaina marobe ahafahanao mianatra momba ny lova Breziliana sy Afrikana. ny trano fisakafoanana lehibe ao Pelo dia manolotra lovia mahafinaritra avy amin'ny sakafo roa. Noho izany, rehefa vita ny fiantsenana fahatsiarovana amin'ireo magazay vita tanana maro manodidina, afaka manandrana ny sakafo tena tsara avy amin'ny sakafo afrikana sy breziliana.
5. Toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao: Wroclaw, Polonina
Ny tanàna lehibe indrindra any Polonina Andrefana, Wroclaw dia iray amin'ireo vatosoa miafina any Polonina. Wroclaw dia mahafinaritra toerana tsy misy lalana any Eoropa, ary ny maritranony maro loko no mahatonga azy ho iray amin'ireo tanàna tsara tarehy any Eoropa. Toerana mareva-doko indrindra eo amin'ny kianjan'ny tsenan'ny medieval, izay ahafahanao mandray ny rivo-piainana nafana ao amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana manodidina.
Noho izany, aza hadino ny maka ny fakantsarinao sy ny kiraronao mandeha tsara mandritra ny dianao eny amin'ny làlana maro loko sy ny tanàna taloha. Manomboka amin'ny ririnina ka hatramin'ny fahavaratra, ny Wroclaw miloko dia miarahaba anao amin'ny fandraisana tsara, ary pierogi poloney feno ovy, fromazy, na voankazo.
6. Nosy Burano, Italia
Iray amin'ireo nosy malaza telo any akaikin'i Venise, Burano no miloko eo anelanelan'ny nosy italiana mahafinaritra telo. ny sambo diany lavitra ny tanibe, Tsara ny trano misy loko mamirapiratra ao Burano toerana fialan-tsasatra ivelan'ny vanim-potoana. Raha afaka manodidina ny nosy ianao 2 ORA, dia handany andro iray manontolo ianao, maka sary fotsiny.
Ny trano mpanjono mahafatifaty manamorona ny tetezana miaraka amin'ireo lakandrano maro dia manampy ny hakanton'i Burano. Manampy ny sarin'ny karatra paosin'ny iray amin'ireo ambony io 5 toerana maro loko any Eropa. Fitsidihana iray andro tsara avy any Venise ny fitsidihana an'i Burano, tsara ho an'ny fiantsenana dantelina sy zava-pisotro atoandro apolo miaraka amin'ny fahitana ny lagoon Venetian.
7. Toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao: Nyhavn, Copenhagen
Ny seranan-tsambo mahafinaritra dia nanentana ny iray amin'ireo mpanoratra boky lehibe indrindra ho an'ny ankizy hanoratra ny Princess and the Pea. Eny, tsy misy. 20 Townhouse dia trano fonenan'ny Danoà Hans Christian Andersen. Nyhavn miloko dia seranan-tsambo nalaza, izay nahenoanao tantsambo’ miantso amin'ny fiteny rehetra.
ankehitriny, ny Nyhavn nohavaozina no ahatongavan'ny mponina miala sasatra amin'ny faran'ny andro. Sakafo hariva miaraka amin'ny mozika jazz, mijery ny filentehan'ny masoandro eo ambonin'ny sambo sy trano fonenan'ny tanàna maro loko, traikefa miavaka.
Miaraka amin'ny varavarana, rindrina, ary ny tafo dia samy hafa loko, Guatape no tanàna be loko indrindra any Kolombia. Ity tanàna miloko ity dia tanàna fialan-tsasatra any Kolombia, miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana sy tendrombohitra. Ary noho izany, ho fomba fijery mahagaga ny tanàna manontolo sy ny lokony, Afaka miakatra mankany La Piedra del Penon ianao, ary eo an-tampon'ny 740 dia mivoha ho anao ny fomba fijery mahatalanjona ny toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao.
na izany aza, ao amin'ny Zocalos ny faritra mamirapiratra indrindra ao an-tanàna, ny faritra ambany amin’ny trano. Haingo vita amin'ny tanana ny zocalos, sary hoso-doko biby na voninkazo sasany, ary ny hafa dia haingo miloko tsotra izao. Hamaranana, manomana farafahakeliny andro roa’ dia mankany Guatape mba hahafahanao mijery ny arabe mamirapiratra sy miloko indrindra eran-tany.
9. Toerana maro loko indrindra eto amin'izao tontolo izao: Colmar, Frantsa
Trano miloko miloko, lakandrano voaravaka voninkazo, Colmar dia tanàna frantsay mahafinaritra ahitana ny angano. Ireo lakandrano tsara tarehy dia hitarika anao amin'ny alàlan'ny lalantsara mahafinaritra mankany amin'ny kianja malalaka. Eto, ny mpanjono dia nipetraka sy niresaka momba ny zava-niainana sy ny tantara an-dranomasina tamin'izany andro izany.
Afaka mankany Colmar ianao avy any Basel any Soisa na tanàna lehibe any Frantsa, amin'ny lamasinina. Noho izany, apetraho ny fitsidihana an'i Colmar amin'ny dianao fialantsasatra Eoropeana. Safidy lehibe iray hafa dia ny mandany ny fialan-tsasatrao manontolo ao Colmar ihany. Na izany na tsia, betsaka ny zavatra azo atao ao Colmar afa-tsy ny maka sary ny toerana be loko indrindra any Frantsa. Ohatra, mitety ny lakandrano, miantsena amin'ny tsena mitafo, ary nanandrana divay Alsace.
Paris mankany Colmar miaraka amin'ny lamasinina
Zurich mankany Colmar miaraka amin'ny lamasinina
Stuttgart mankany Colmar miaraka amin'ny lamasinina
Luxembourg mankany Colmar miaraka amin'ny lamasinina
10. Chefchaouen, Maraoka
Miafina ao anaty lohasaha maitso, just 2 ora avy any Tangier, no Chefchaouen vatosoa manga sy sarobidy indrindra. Voaloko manga sy fotsy, misy haingo miloko, Chefchaouen no toerana mamirapiratra indrindra any Maraoka. Mitovy amin'ny nosy grika Santorini, ny arabe hafahafa sy ny maritrano dia mahasarika ny mpanao dia lavitra indrindra.
Ny angano dia milaza fa ny safidy loko tsy manam-paharoa dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-15 fony ny Jiosy nonina tao amin'io tanàna kely io.. Ary noho izany, ny loko manga dia maneho ny lanitra sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha ny Jiosy dia tsy mponina ao amin'io tanàna kely io intsony, na izany aza dia nitahiry ny hakantony nandritra ny taona maro ilay toerana. ankehitriny, mahasarika mpizaha tany an'arivony ity tanàna kely ity, koa miomàna hihaona amin'ny vahoaka mientanentana manodidina ny zoro manga rehetra.
Izahay ao Save A Train dia faly hanampy anao amin'ny drafitra fitsangatsanganana any amin'ny 10 toerana maro loko indrindra eran-tany.
Tianao ve ny hampiditra ny lahatsoratry ny bilaogy "Toerana 10 Maroloko Eran-tany" ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-colorful-places-world%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
maro loko	ColorfulCities	ColorfulPlaces	ColorfulTowns	Mostcolorfulcitiesineurope	mostcolorfulplacesworldwide